ET302: Rakkoon xiyyaara namoota galaafate mudate maal ture? - BBC News Afaan Oromoo
Xiyyaara Daandii Xiyyaara Itoophiyaa torban sadiin dura balaan irra ga'e ilaalchisee odeeffannoowwan ba'aa jiru.
Sirni to'annaa balalii xiyyaara Boeing 737 MAX jedhamuu kun xiyyaarichi akka saffisa isaa hin sirreeffanneefi hin dhaabbanne gochuu isaarraan kan ka'e lubbuun namoota 157 akka darbuuf sababa ta'uun isaa himamaa jira.
Balaliistonni kunneen rakkoo xiyyaara kana irra ga'e to'achuudhaaf sirna dandeessisa jedhame fayyadamanis balaa sana hambisuu akka hin dandeenye namoonni qorannoo gaggeeffamaa jirutti dhiyeenya qaban WSJ'tti himaniiru.
Saanduuqa odeeffannoo balalii xiyaarichaa waraabu irraa odeeffannoo sadarkaa duraan argame irraa hubachuun akka danda'amettis osoo balaan sun hin qaqqabiin dura xiyyaara gadi bu'aa jiru sana oolchuu danda'a sirna jedhamu akka hojjetu taasifamee akka ture beekameera.
Maddawwan akka maqaan isaanii hin heermane barbaadan waabeffachuudhaan WSJ waa'ee balaa sanaa bu'aa qorannichaa sadarkaa duraa akka gabaasetti siisteemiin kompiiteraa akka ol-ka'insaafi gadi bu'insa xiyyaara to'achuudhaaf gargaaru rakkoon akka mudate agarsiisaniiru.
Xiyyaara Itoophiyaarra maaltu ga'e?
Daandiin Xiyyaara Itoophiyaa lakkoofsa balalii ET302 ta'e gaafa Bitootessa 10 saatii 2:38 irratti gara Naayiroobiitti ka'ee daqiiqaa muraasa keessatti ture kan rakkoon isa mudate.
Xiyyaarri kun Buufata Xiyyaaraa Idil-addunyaa Boolee irraa ka'ee daqiiqaa ja'a booda erga KM48 balali'ee booda naannoo Bishooftuu ganda Tulluu Farraa jedhamutti kufee caccabe.
Daandiin Xiyyaara Itoophiyaa dandeettii balaliisaa ol-aanaa xiyaarichaa Yaared Getaachoo ilaalchisee muuxannoo saatii kuma 8 ol balaliisisuu akka qabu eeruun "dandeettii isa galateeffachiisu" qaba ture jedheera.
Guyyaa balaan kun qaqqabettis Yaared Getaachoo rakkoon akka isa mudateefi deebiyee akka qubatu to'attoota balali'insaatiif ergaa dabarsee ture.
Goodayyaa suuraa Xiyyaarota Boeing 737 MAX dhaabbatanii jiran
Kan gaaffii keessa gale MCAS'n maalidha?
Balaa uumame kanaan walqabatee siisteemiin nageenya xiyyaaraa ittiin eegamu qorannoo taasifamuuf dhimma ijoo ta'eera.
MCAS siisteema akka xiyyaarri gar-malee ol hin baaneefi gadis hin buuneef to'achuudhaaf akkaataa dandeessisuun kan hojjetamedha.
Xiyyaara rakkoon suuta jechuu kan mudatu yeroo xiyyaarichi irraan gadee deemaa jiruttidha. Kun ammoo dandeettii to'annaa kan kaattuuwwan/baalleewwan xiyyaaraa cinaa jiran humna dhowwachuudhaan akka xiyyaarichi kufu taasisuu danda'a.
Karaa barameen funyaan xiyyaarichaa suuta balali'uu keessaa yeroo baasuudhaaf jedhutti akka funyaan xiyyaarichaa gadi gara galu taasisa. Gosoonni xiyyaarota balaan irra ga'e Boeing 737 MAX irra siistemoonni to'annaa jiran (MCAS) ammoo yeroo wanti akkasii mudatanitti xiyyaaricha ofiidhuma isaa sirreessuudhaan bakka isaatti deebisa.
Xiyyaaricha irratti wanti walfakkaatu kan mudatu yoo ta'eefi yoo kana ta'uu beeke siisteemni to'annaa kun irra deddeebiyuudhaan tarkaanfii sirreessuu ofiidhuma isaatiin ni fudhata.
Balaa Daandii Xiyyaara Itoophiyaa kanarra ga'een baatii shaniin dura xiyyaarri Indoneeshiyaa rakkoon walfakkaataa to'annaa xiyyaarichaa kofa balali'insaa agarsiisu qaqqabee turee ibsameera.
Yaalii balalii fakkeessuun shaakaluu (simulator) irratti akka mirkanaa'eetti siisteemiin to'annoo MCAS jedhamu kun hanga eegameen ol cimaa waan ta'eef irra deddeebi'uun funyaan xiyyaaraa akka gadi garagalu dirqisiisa.
Balaa xiyyaara Indoneeshiyaa qaqqabe baruudhaaf yaalii simulator irratti taasifameen akka irra ga'ameen xiyyaarichi irraan gadee funyaaniin galaana keessatti kufuuf akka jiru kan barame yeroon sekondii 40 gadi ta'e yeroo isaan hafutti ta'uu isaa Niiwuu Yoork Taayims gabaaseera.
Kana irraan kan ka'eenis Boeing MCAS akkamiin fayyadamuun akka danda'amu irratti balalistotaaf qajeelfama baasus, sooftiweerii/mosaajii siisteema xiyaara irratti qabate to'achuudhaaf barbaachisu irratti jijjiirama barbaachisu kan beeksise garuu torban darbe ture.
Dabalataanis, yeroo balali'uu rakkoon yoo mudatutti paayiletootaaf of eeggannoo kennuu kan danda'u ifti akeekkachiisaas xiyyaarota lamaan, kan Itoophiyaafi Indoneeshiyaa irratti hin qabsiifamne ture.
Balaawwan lamaan maaltu walfakkeessa?
Odeeffannoon balali'insaa xiyyaarota balaan qaqqabe irraa argaman akka walfakkaatan qorattoonni mul'isaniiru.
Akka dubbisni irraan olee ol-ba'uufi irraan gadee gadi bu'uun xiyyaarotaa agarsiisutti, xiyyaaronni lameen oliifi gadi jedhaa akka turaniifi balalistonnis kana to'achuudhaan xiyyaaronni kunneen ol ba'anii akka balali'an taasisuudhaaf carraaqqii taasisaa turan.
Boordii Nageenya Tiraanispoortii Biyyaalessaa Itoophiyaa waliin ta'uudhaan Abbaan Taayitaa Tiraanispoortii Daandii Xiyyaara Ameerikaa akka jedhutti odeeffannoowwan bakka balaan kun itti uumameefi saatalaayitii irraa argaman akka agarsiisanitti xiyyaarota lamaan irratti wantoonni baay'ee walfakkaatan akka mul'atan dubbateera.
Meeshaan odeeffannoowwan balali'insaa xiyyaara daandii Itoophiyaa kana waraabuufi kan sagaleen kutaa paayileetotaas waraabu gara Faransaay geeffamee qorannoon irratti taasifameera.
Joe Biden filannoo pirezedaantummaa bara 2020 irratti akka dorgoman beeksisan